DC Super Heroes မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
08 / 10 / 2021 08 / 10 / 2021 ခရစ် Wharfe 99 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၁၈၉ Taj Mahal, 76023 အဆိုပါ Tumbler, ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile, ၇၆၁၆၁ ၁၉၈၉ Batwing, ၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler Scarecrow Showdown, 76240 Batmobile Tumbler, Aaron Eckh ပါart, Anne Hathaway, Batman, Batmobile, Catwoman, Christian Bale, ခရစ္စတိုဖာ Nolan, Cillian Murphy, Dc, DC ကသူရဲကောင်းများ, Heath လယ်ဂျာ, Jesper Nielsen, ဂျိုကာ, Lego, Lego Batman, Lego DC က, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, LEGO.com, Michael keaton, reviews, Scarecrow, The Dark Knight ဟာ, The Dark Knight ဟာ Rises, အဆိုပါ LEGO Group, TOP4, tumbler, နှစ်မျက်နှာ
Lego Batman ၇၆၂၄၀ Batmobile Tumbler သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဒီဇိုင်းဘာသာစကားတွင်လေးနက်စွာအမြစ်တွယ်နေဆဲဖြစ်သော ၂၀၂၁ set တစ်ခုဖြစ်သည်။
05 / 10 / 2021 05 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 202 Views စာ0မှတ်ချက် Architecture, art, Batman, Black ကသောကြာနေ့, Black ကသောကြာနေ့ 2021, BrickHeadz, City, ဖန်ဆင်းရှင်, Creator 3-in-1, Creator Expert, Dc, DC ကသူရဲကောင်းများ, Disney, DOTS, Friends, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Ideas, Jurassic World, Lego, Lego Architecture, LEGO art, Lego Batman, Lego BrickHeadz, Lego CIty, Lego ဖန်တီးသူ, Lego Creator 3-in-1, Lego Creator Expert, Lego DC က, Lego, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Disney, Lego DOTS, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Friends, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ideas, Lego Jurassic World, Lego မှ marvel, Lego Monkie Kid, Lego Ninjago, Lego Speed Champions, Lego Star Wars, Lego Stranger Things, Lego စူပါမာရီယို, Lego Technic, Lego Vidiyo, LEGO.com, Marvel, Monkie Kid, Ninjago, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, Speed Champions, Star Wars, Stranger Things, စူပါမာရီယို, နည်းပညာ, အဆိုပါ LEGO Group, Vidiyo
LEGO Batmobile အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကိုယခုအော်ဒါမှာယူနိုင်ပါပြီ
01 / 10 / 2021 23 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 74 Views စာ0မှတ်ချက် 70913 Scarecrow ကြောက်စရာမျက်နှာ - ချွတ်, 76001 လင်းနို့ vs. Bane: Tumbler Chase, ၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler Scarecrow Showdown, 7888 The Tumbler: Joker ၏ရေခဲမုန့်အံ့အားသင့်စရာ, Batman, Batman စတင်ခဲ့သည်, ခရစ္စတိုဖာ Nolan, Dc, DC ကသူရဲကောင်းများ, Lego, Lego Batman, LEGO.com, Scarecrow, The Dark Knight ဟာ, The Dark Knight ဟာ Rises, အဆိုပါ Lego Batman Movie,, အဆိုပါ LEGO Group
သန့်ရှင်းသော LEGO set အသစ်၊ Batman! ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ ပထမဆုံးသော minifigure-scale Tumbler ကိုတရားဝင်အွန်လိုင်းမှ ၀ ယ်ယူနိုင်ပါပြီ
15 / 09 / 2021 24 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 308 Views စာ 1 မှတ်ချက် Architecture, art, Batman, Black ကသောကြာနေ့, Black ကသောကြာနေ့ 2021, BrickHeadz, City, ဖန်ဆင်းရှင်, Creator 3-in-1, Creator Expert, Dc, DC ကသူရဲကောင်းများ, Disney, DOTS, Friends, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Ideas, Jurassic World, Lego, Lego Architecture, LEGO art, Lego Batman, Lego BrickHeadz, Lego CIty, Lego ဖန်တီးသူ, Lego Creator 3-in-1, Lego Creator Expert, Lego DC က, Lego, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Disney, Lego DOTS, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Friends, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ideas, Lego Jurassic World, Lego မှ marvel, Lego Monkie Kid, Lego Ninjago, Lego Speed Champions, Lego Star Wars, Lego Stranger Things, Lego စူပါမာရီယို, Lego Technic, Lego Vidiyo, LEGO.com, Marvel, Monkie Kid, Ninjago, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, Speed Champions, Star Wars, Stranger Things, စူပါမာရီယို, နည်းပညာ, အဆိုပါ LEGO Group, Vidiyo, VIP တနင်္ဂနွေ, ၂၀၂၁ VIP ပိတ်ရက်
12 / 08 / 2021 18 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 1135 Views စာ0မှတ်ချက် Architecture, art, Batman, Black ကသောကြာနေ့, Black ကသောကြာနေ့ 2021, BrickHeadz, City, ဖန်ဆင်းရှင်, Creator 3-in-1, Creator Expert, Dc, DC ကသူရဲကောင်းများ, Disney, DOTS, Friends, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Ideas, Jurassic World, Lego, Lego Architecture, LEGO art, Lego Batman, Lego BrickHeadz, Lego CIty, Lego ဖန်တီးသူ, Lego Creator 3-in-1, Lego Creator Expert, Lego DC က, Lego, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Disney, Lego DOTS, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Friends, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ideas, Lego Jurassic World, Lego မှ marvel, Lego Monkie Kid, Lego Ninjago, Lego Speed Champions, Lego Star Wars, Lego Stranger Things, Lego စူပါမာရီယို, Lego Technic, Lego Vidiyo, LEGO.com, Marvel, Monkie Kid, Ninjago, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, Speed Champions, Star Wars, Stranger Things, စူပါမာရီယို, နည်းပညာ, အဆိုပါ LEGO Group, Vidiyo, VIP တနင်္ဂနွေ, ၂၀၂၁ VIP ပိတ်ရက်
10 / 08 / 2021 11 / 08 / 2021 ရော့ Paton 325 Views စာ0မှတ်ချက် 1966 Batman, ၇၆၁၃၉ Batmobile, 76052 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batcave, 76188 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batmobile, အာဒံအနောက်, Batman, Burt ရပ်ကွက်, Dc, DC ကရုပ်ပြ, DC ကသူရဲကောင်းများ, Gotham, ဂျိုကာ, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego, DC ရုပ်ပြစူပါသူရဲကောင်းများ, Lego, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, reviews
02 / 04 / 2021 03 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 917 Views စာ0မှတ်ချက် 8456 Fiber Optic Multi Set, App ကို, Dc, DC ကသူရဲကောင်းများ, DC ကစူပါဟီးရိုးများ, Lego, Lego DC က, Lego, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego မှ marvel, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Star Wars, Lightsaber, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Reddit, Star Wars, superhero, Superheros တွေက, Znap
အဘယ်အရာကိုနိုင်ဘူး LEGO Group The Suicide Squad နောက်တွဲယာဉ်အသစ်နဲ့အတူလား?
26 / 03 / 2021 26 / 03 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 640 Views စာ0မှတ်ချက် Dc, DC ကရုပ်ပြ, DC ကသူရဲကောင်းများ, ဂျိမ်းဂွန်, Lego, Lego DC က, Lego, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, R အဆင့်သတ်မှတ်သည်, မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေ Squad, အဆိုပါသေကြောင်းကြံစည်မှု Squad
James Gunn ၏ The Suicide Squad ၏ပထမဆုံးနောက်တွဲယာဉ်မှာ LEGO ၏မေးခွန်းကိုမေးခြင်းဖြစ်သည်